Senatera Aostraliana Voaraoka Fa ‘Nitsabaka’ Tamin’ny Raharaha Politika Ao Malezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2013 15:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Notànana nandritra ny 15 ora tao amin'ny seranam-piaramanidina ao Kuala Lumpur, ao Malezia ilay Senatera Aostraliana Nick Xenophon alohan'ny nandroahana azy rehefa voampanga ho ‘fahavalom-pirenena izy.’ Nilaza ireo manampahefana Maleziana fa “mety hitondra fanakorontanana sy zava-doza ho an'ny fiarahamonina” i Xenophon.
Tokony hihaona tamin'ireo lehiben'ny mpanohitra ao Malezia i Xenophon mba hikarakara mikasika ny fanaraha-maso ny fifidianana amin'ity taona ity. Nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana Bersih izy volana vitsy lasa izay, fihetsiketsehana goavana an-dalambe natrehin'ireo mpanohitra malaza.
Xenophon no fantatra fa solombavambahoaka Aostraliana voalohany voaraoka avy amin'ny firenena. Naneho ny fahadisoam-panantenany ny governemanta Aostraliana manoloana ny fanapaha-kevitr'i Malezia handroaka an'i Xenophon.
Senatera Nick Xenophon. Sary tao amin'ny Wikimedia
Lehiben'ny mpanohitra Anwar Ibrahim niampanga ny fanapaha-kevitra handroaka an'i Xenophon:
Tiako ny mampatsiahy ny Praiminisitra Najib Razak fa tsy manan-jo handray ireo mpitsidika ho fahavalom-pirenena izy noho ny antony fanakianan'izy ireo ny governemanta tantanin'ny UMNO . Tsy an'ny UMNO irery i Malezia. Fa an'i Maleziana rehetra na inona na inona firehana politikan'izy ireo.
Raha marina tokoa fa nampiahiahy ny Senatera Xenophon mikasika ny fizotry ny fifidianana ankapobeny hoavy ao anatin'ny fahamarinana, mbola tsy nanitsakitsaka lalàna voasoratra na nanao fihetsika mety mandrahona sy manohintohina ny filaminantsika izy.
Tholu nanontany hoe nahoana ny demokrasia tahaka an'i Malezia no tsy mahazaka tsikera:
Raha tsy mahazaka fanehoan-kevitra fanakianana ataon'ny teratany vahiny mikasika ny fomba fitantanan'ny governemantany ny Praiminisitra Najib Razak, ahoana ny fomba hinoantsika hanova an'i Malezia ho firenena modely, mandroso sy tena demokratika miaraka amin'ireo fanampiny toy ny fahalalaham-pitenenana sy ny fanajana tanteraka ny zon'ny olombelona?
Manafin-javatra ve ny governemanta, hoy i Tan Zhong Yan nanoratra
Agamba marina ny an'i Xenophon raha nilaza fa mpanao didy jadona ny governemanta Maleziana ary toa mbola voaporofo indray fa tsy mahazaka tsikera ny governemanta.
Mampiteraka ahiahy ihany koa ny fandroahana an'i Xenophon amin'izay kasain'ny governemanta afenina noho ny fatahorany izay rehetra mizotra mankany amin'ny mangarahara.
Aliran mamerina ny fijery fa tsy azo amarinina ny fandroahana:
Mifandraika amin'ny tsikera nataon'ilay senatera tamin'ny fo madio tamin'ny fitenenana mahery nataon'ny governemanta nanoloana ny Bersih ve izao fandroahana izao? Fa raha izany dia mampalahelo indrindra, indrindra fa avy amin'ny fitondran'i Najib izany, izay efa nilaza tamim-pireharehana indray maka fa i Malezia no demokrasia tsara indrindra teto ambonin'ny tany. Eny, izay tsikera rehetra ao amin'ny demokrasia mivelatra, izay mifangarika amin'ny fitondrana jadona, dia tsy maha-antoka ny fandroahana tsy misy fototra mazava ireo mpitsikera
Saingy voatsikera noho ny fitsabahany amin'ny raharaha anatin'i Malezia i Xenophon. Navoakan'i Rocky's Bru ny lahatsoratra iray nosoratan'i RL izay mampahatsiahy fa nanitsakitsaka ny lalàna anatin'i Malezia i Xenophon tamin'ny nandraisany anjara tamin'ny famoriam-bahoaka notontosaina volana vitsivitsy lasa izay:
…Raha nitady ny handraisana anjara amin'ny fanaraha-maso iraisampirena amin'ny fifidianana hotontosaina ao Malezia i Xenophon, dia tsy tokony nandray anjara tamin'ny fidinana an-dalambe tsy nanara-dalàna tao amin'io firenena io, ary tokony ho nirotsaka tao amin'ny fepetra tadiavin'ny lalàna maleziana izy hahatonga azy ho mpanara-maso nahazo fankatoavana.
Tsy tokony hohadinoin'ny Maleziana ihany koa ny tanana lavan'ny lalàna Aostraliana izay mametraka izay rehetra tsy Aostraliana tratra nanao fandikan-dalàna madinika ho persona non grata [olona tsy mendrika ho raisina]. Tranga nampahaleho ny fandroahana an'i Xenophon, saingy mila mankatò ny lalàna Maleziana ny vahiny raha te-ho mpanara-maso ny fifidianana na hipetrapetraka eto amin'ny firenena, fa raha tsy izany, tokony ho azo ekena mihitsy ny fandraisana andraikitry ny fitondrana amin'ny fiarovana tsy idiran'ny vahiny ny raharaha politika anatin'ny firenena.